Kuteedzera Kwevatengi | Piedra (Xiamen) Chivezwa Co., Ltd.
Mr. Bruce Kubva America (Mirror Mushroom Sculpture Project: 2.5m Height)
Ndinokutendai nekuda kwezvifananidzo zvikuru zvawatiitira makore iwayo. Iwo matanda esimbi asina kusimba anoshamisa kwazvo uye akwezva vashanyi vakawanda mubindu gorofu. Ndatenda nekuda kwehunyanzvi hwehunyanzvi mukuisa. Sezvawakaona, mushwa wehowa waive wakanaka uye wakanaka pakukwezva kana muzuva rechando! Waigona kuona nzvimbo yakanaka inoratidzira kubva pamusoro. Chengetedza hukama hwakareba uye hwakanaka mune ramangwana.
Ms Roeqsana anobva kuIndonesia (Painted loco Stainless Steel Sculpture Project: 10.4m L * 2.3m W * 3.5m H)
Iyi hofori yekuveza zvivakwa ine mbiri kwazvo uye inokatyamadza izvo zvakanaka sekushongedza kwekunze nekunze. Uye isu takaratidza iyo yakavezwa muIndonesia zvitoro, iyo yaive inoshamisa dingindira kuratidza hunyanzvi tsika pano. Kugadzira kwako kwakanakisa uye kushanda nesimba kuti ubate chirongwa chedu zvinokosheswa kwazvo.
Mr. David anobva kuMalawi(Mirror Abstract Metal Sculpture Project: 215cm kureba)
Yako anoshamisa uye ekugadzira esimbi zvivezwa zvakanyengetedza kunze vatengi zvakanaka. Ivo vanovhunduka uye vanokwezhwa neaya azvino uye ezvakagadzirwa izvo. Vashandi vako vakatiitira mabasa akanaka kwazvo ounyanzvi. Ngatirambei tichiita bhizinesi mune ramangwana.
MR. Saif kubva kuOman (Mirror CircleMetal Sculpture Project: 5m Kureba)
Wow, ichi chinoshamisa denderedzwa chimbi chivezwa, icho chakaiswa sekuvaka kunze kwekushongedza. Makatiitira basa rakakura uye isu tinofara kwazvo kukusarudzirai pamwe chete nekambani. Mhedzisiro yegirazi yakakura iyo inogona kuratidza mumvuri ipapo. Tarisira mberi kune yedu yakawanda nguva kubatana.
MR. Michael kubva kuCzech (Sphere Corten Simbi Sculpture Project: 80cm Height)
Une chivezwa chakavezwa pano. Zvakanaka chaizvo kutenga ichi chivezwa kubva kwauri. Iyo sphere yakasungwa uye inobatwa nayo chaizvo, izvo zvinonyanya kukodzera kushongedzwa kwebindu. Ndatenda nekuomarara kuita kuti uveze zvakanaka uye kuronga kutumira kuCzech zvakachengeteka. Tarisira kuwana nguva yakawanda yekubatana nayo.
Mr.Slave kubva kuIsrael (Karate Bronze Statue Project: 1m kureba）
Chaizvoizvo ndinotenda nekuda kwekunakisa kwawakatibikira isu. Iyo Karate Statue yaive chaiyo chaiyo iyo yakaiswa seDojo yekushongedza kwekunze. Ini ndakakatyamadzwa zvikuru kuti iwe unogona kuigadzira muchivezwa chaicho chete zvinoenderana nemufananidzo uye tsananguro. Neshoko, ndinokutendai chose kuedza kwamakatiitira. Kunyange zvakadaro, ramba uchitaura nezvebhizimusi rechiumbwa.
Ms.Zarema kubva kuNorway (Baron Fiberglass Sculpture: 2m kureba）
Iyi Baron Sculpture yaive yechokwadi chaizvo zvekuti yakada kufanana pikicha ini yandakapa. Ndiri kufara kwazvo kuti inogona kutenga chivezwa kubva kune yako kambani. Ndiri kubatwa zvikuru neruzivo rwenyu rwekugadzira zvigadzirwa zvekuveza uye basa rapfuura. Uye mhinduro yako inokurumidza pamibvunzo yemifananidzo inokoshesa zvikuru. Chido chinogona kuramba chichibatirana nacho mune ramangwana.